"Sidinga ukunqoba imidlalo" - u-Ngidi
Lungi Ngidi during the 2020 KFC T20 Series training session and press conference for South Africa at Newlands Cricket Stadium,Cape Town on 25 February 2020 ©BackpagePix
Oshwiba ngokushesha kuma-Proteas u-Lungi Ngidi uthe iqembu “lisekhasini elifanayo” emuva kokuhlukana kwikhempu yosiko lweqembu ngesonto elidlule. Iqembu labadlali abawu-32 livumelane ngokuthi isikhathi sokubeka umthwalo wakudala eceleni kanye nokujwayela ukukhuluma ngokuthi yini abafuna ukuyinzuza, futhi kube isikhathi “sokwenza ngendlela abakhulume ngayo” kanye nokunqoba imidlalo uma sekudlalwa futhi.
“Sahlala odabeni – sidinga ukunqoba imidlalo,” kusho u-Ngidi. “Yebo, ukuthola indlela esizokwenza lokho yinto eyenzeka njalo. Akuyona into eyodwa elula njengokuthi ‘yenza lokhu futhi unqoba imidlalo.’ Ngicabanga ukuthi kuningi ukuzama nokuhluleka kanye nabadlali abaningi abasha, sizoba namacebo amaningi amasha kanye nezindlela ezintsha zokwenza izinto kodwa kukho konke, ekugcineni, kumele sinqobe imidlalo.”
Iqembu lahlangana e-Skukuza ukuxoxa ngezinto eziningi ezibalulekile kubona futhi nokusebenzela usiko lweqembu elizoveza iqembu labadlali abakhona manje kanye nendlela abafuna ukuzwa ngayo isimo seqembu kuyela phambili. u-Ngidi uthe uzithandile izintsuku abazicithe ndawonye futhi ujatshuliswe izinxoxo ezabakhona, ikakhulukazi lezi ezihambelana nokudlala kweqembu, inguquko, uhlanga kanye nokulingana.
“Ukuhamba laphaya, ngezwa ukuthi saxoxa futhi safika lapha obekumele sifike khona ngokwekhempu. Ngazizwa ngijabulile njengomdlali, ngaqonda yonke into kangcono. Wonke umuntu esekhasini elifanayo kusibeke endaweni enhle ngokuqhubekela phambili,” kuqhubeka u-Ngidi. “Kwabhekwa izinto eziningi. Lezi akuzona izinto okumele ziphazamise ukudlala kwethu enkundleni.”
“Izinxoxo zenguquko kanye nohlanga kuhlangene nesimo seqembu, bekungemnandi ngalesosikhathi, kodwa kuyinto obekumele yenziwe.”
“Abadlali abaningi baxoxa ngezindaba zabo nokuthi bazizwa kanjani kulezi ezinye izinhlanga. Uyezwa ukuthi abantu bazizwa kanjani futhi kanye nenguquko, siyazi ukuthi akuqhamuki kubadlali, kuqhamuka kuhlelo nokuthi abantu abaningi badinga ukwazi ukuthi yini kunjalo futhi ukuba nalezinxoxo kanye nokusiza abantu baqonde ukuthi yini izinto ezithile zinjalo, mina ngizwa, kubeke abantu abaningi esithombeni sokuqonda,” esho eqhubeka.
“Siyazi ukuthi udlalela i-South Africa ngokufaneleleka kwakho hayi ngenxa yombala wesikhuma sakho. Ngicabanga ukuthi okukhulu kube ukusiza wonke umuntu aqonde ukuthi kungani. Ngizwe sengathi ngezinye izikhathi abantu bayasaba noma banamhloni ukubuza, ngakho ukwazi ukukhuluma kulesasimo kukhanyisele abantu abaningi.”
Lomdlali oneminyaka ewu-24 akakusabi ukubhekana nezihloko ezinzima ezifana ne-Black Lives Matter (BLM) e-South Africa. Ukholwa ukuthi uma abantu abakwiqembu bangasheshe baqonde ngalaba abadlala nabo, kungangcono basebenzisane behlangene futhi basebenzelane. Lokhu kuhambisanile nokuzibophezela ekwakheni isimo kanye nosiko oluvuma futhi olamukela ukuhluka kwabo njengama-South Africans futhi ukukusebenzisa njengethuluzi lokwakha isizwe kanye nento esizayo uma kudlalwa uma sebephinda bengqoka umfaniswano.
“Nezinxoxo mayelana ne-BLM, ngicabanga ukuthi okubalulekile ukuthi kubule izinxoxo futhi kwasiza abantu abaningi ukuthi baqonde (ukuthi baqhamuka kuphi abanye). Okubaluleke kakhulu kwinxoxo ye-BLM eNingizimu Afrika uhlanga, inguquko kanye nokulingana, ukuthi kugqamise izinto eziningi obekumele kubhekwane nazo futhi wonke umuntu obengaqondi, abantu bekumele baxoxe futhi bachaze, ngakho ngicabanga ukuthi kusize kakhulu kwiqembu. Ngicabanga ukuthi okukhulu kusize abantu abaningi bakhulume ngezinqginamba akade bezithole zingakhululekile.”
“Ngendlela yokwenza izinto, ngizwa sengathi abantu kumele bazivumele ngaphandle kokwesaba ukwehlulelwa futhi kimina, ingoba ngiyazi ukuthi ngidlala ikhilikithi yami enhle uma ngiyimina. Uma ngingakwazi ukuba imina, angizizwa sengathi nginganikela ngo-100% okuba imina nalokhu engakwenza. Ngakho, kimina kube okukodwa kwalokhu obekubalulekile – ukwazi ukungena kwisimo futhi ungezwa ukuthi kumele uvumelane ukuze ungene. Samukela wonke umuntu ngendlela abayiyona, futhi wonke umuntu uhlukile, yilokho okwenza iqembu libe likhulu futhi isimo sikhulu.”
“Ukuvuselelwa kwe-values system kubalulekile kwisizwe sethu kanye neqembu esifuna ukulakha. Okungokwalabo – wonke umuntu kumele azizwe amukelekile, uzwelo kanye nenhlonipho – uma umqonda kangcono umuntu, ungazwelana naye futhi ukhulume nibe nezinxoxo ezivulekile (nabo), ngakho ama-values systems amasha abalulekile futhi ekugcineni, sizwe ukuthi izona esizozisebenzisa kuyela phambili.”
“Njengoba iNingizimu Afrika iyisizwe esihlukile, sithole ukuthi kungamandla ethu kanye nokuthi yini sibe iqembu eliqinile,” esho evala u-Ngidi.
Aiden Markram (Momentum Multiply Titans), Andile Phehlukwayo (Hollywoodbets Dolphins), Anrich Nortje (Warriors), Beuran Hendricks (Imperial Lions), Bjorn Fortuin (Imperial Lions), Daryn Dupavillon (Hollywoodbets Dolphins), David Miller (Hollywoodbets Dolphins), Dean Elgar (Momentum Multiply Titans), Dwaine Pretorius (Imperial Lions), George Linde (Cape Cobras), Glenton Stuurman (Warriors), Heinrich Klaasen (Momentum Multiply Titans), Janneman Malan (Cape Cobras), Jon-Jon Smuts (Warriors), Junior Dala (Momentum Multiply Titans), Kagiso Rabada (Imperial Lions), Keegan Petersen (Hollywoodbets Dolphins), Keshav Maharaj (Hollywoodbets Dolphins), Kyle Verryenne (Cape Cobras), Lungi Ngidi (Momentum Multiply Titans), Lutho Sipamla (Imperial Lions), Pieter Malan (Cape Cobras), Pite Van Biljon (VKB Knights), Quinton de Kock (Momentum Multiply Titans), Rassie van der Dussen (Imperial Lions), Reeza Hendricks (Imperial Lions), Rudi Second (Warriors), Senuran Muthusamy (Hollywoodbets Dolphins), Sisanda Magala (Imperial Lions), Tabraiz Shamsi (Momentum Multiply Titans), Temba Bavuma (Imperial Lions), Zubayr Hamza (Cape Cobras), Theunis de Bruyn (Momentum Multiply Titans).
u-Faf du Plessis akwazanga ukubakhona ngenxa yokuzalwa kwengane yakhe yesibili.
Kungiqinisile ukulimala – u-Ngidi u-Verreynne ubonga akufunde kuma-Proteas u-De Kock uzoba ukapteni wama-Proteas weqembu lama-T20, kubuya u-Steyn kwabizwa u-Magala no-Van Biljon kuma-T20 Ukuma kweqembu lama-Proteas kuma-ODI Babizelwe i-Test yokugcina abadlali abadedelwa kuma-Proteas i-CSA imemezela iqembu elifanayo lama-Proteas kuma-Test asele kwi-series u-Petersen ubizwe okokuqala kuma-Proteas u-Boucher ugculisekile ngenqubekelo phambili yama-Proteas u-Hamza uletha ukukhanya ekushayeni kwama-Proteas i-India inqobe i-series ngokunqoba nge-innings u-Linde uzothatha indawo ka-Maharaj kumdlalo we-Test wokugcina